Tsidiho ny San Pedro Alcántara | Vaovao momba ny dia
Tsidiho ny San Pedro Alcántara
España Manana toerana fizahan-tany maro izay mety tsy dia tian'ny mpitsidika vahiny izy. Fotoana izao hampahafantarana azy ireo satria ny fivezivezena manerana ny firenena dia tena ahazoana aina ary misy perla mahafinaritra toy ny, ohatra, ny tanànan'i San Pedro Alcantara.
ny Any Malaga, Andalusia, tena akaikin'ny afovoan'i Marbella, noho izany dia fitora-bato avy amin'ny toerana itodian'ny mpizahatany malaza io. Noho io antony io dia tsy misy ny fialan-tsiny amin'ny tsy fiantsenana sy ny fahalalana azy.
Araka ny noteneninay, dia ao amin'ny faritanin'i Malaga, iray amin'ireo faritany valo mandrafitra Andalusia. Malaga dia tany manankarena amin'ny tantara, misy dolmens taloha sy sary hosodoko lava-bato an'arivony sy an'arivony taona, saingy nandalo ihany koa ny Carthaginians, Roman ary Byzantine. Izany rehetra izany dia nanankarena ny kolontsaina tamin'ny fomba mahatahotra.
San Pedro Alcántara dia 10 kilometatra miala an'i Marbella ary roa avy any Puerto Banús, tranokala fizahantany raha misy. Ny toerana teraka tamin'ny tanan'ny nananganana zanatany fambolena natokana ho an'ny fambolena fary tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia natsangan'ny Márqués del Duero voalohany, ny Jeneraly Manuel Gutierrez de la Concha e Iriyogen, ary tsy dia niova firy nanomboka teo.
Ankehitriny ny tanàna dia mbola manana trano sy trano fotsy kely, arabe tery, milamina ary milamina. Ny fo no Kianjan'ny fiangonana, tempoly fotsy sy fanjanahantany tamin'ny 1866, ivon'ny fivavahana katolika an'ny mponina. Ny fiangonana dia may tanteraka tamin'ny 1936, nandritra ny ady an-trano, ary tsy maintsy naverina tamin'ny laoniny, ka dia tsy nisokatra izany raha tsy tamin'ny taona voalohan'ny folo taona manaraka.
Ny fitsidihan'ny mpizahatany any San Pedro Alcántara dia mety hanomboka eto, ao amin'ny Plaza de la Iglesia. Ny atin'ny tempoly dia tsotra, fotsy, misy tendrony afovoany misy portico telo, turret ary tafontrano, naverina tamin'ny 2013, miaraka amina sisiny roa. Raha tianao ny fizahan-tany ara-pivavahana dia azonao atao koa ny mitsidika ny Paroasy ny Virgen del Rocío, taonjato faha-XNUMX ary ny Basileica Paleo-Christian an'ny Vega del Mar, iray amin'ireo tranainy indrindra any Espana satria heverina fa nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Noho ny fifangaroan'ny kolontsaina dia ho hitanao ny endriny maro amin'ny endriny.
Ny fitsidihana manaraka amin'ny faritra iray ihany amin'ny kianja dia ny Villa misy an'i San Luis. Eo akaikin'ny tranobe izy io ary naorina tamin'ny taona 1887. Trano tsy miankina an'ny fianakavian'i Cuadra Raoul izy io, fianakaviana iray taona vitsivitsy taty aoriana nividy ny zanatany fambolena iray manontolo rehefa tsy afaka nandoa ny trosany ny marquis. Ny fianakaviana dia avy any Paris, toerana onenan'izy ireo manokana amin'ny vola sy banky, ary taorian'ny fividianana dia naorina ny trano.
Ny tranobe dia manana fomba frantsay, gorodona telo ary endrika mahitsizoro, lavitra be amin'ny fomba Andalusia mahazatra an'io faritra io. Saingy, raha jerena fa avy any Frantsa ny fianakaviana, dia takatra izany. Na izany aza, Tamin'ny taona 40 dia niparitaka ny zanatany amin'ny fambolena ary ny filankevitry ny tanànan'i Marbella no naka ny toerana, an'ny tanàna sy ny tranon'ny tenany izay nanomboka tamin'izay dia nahavita ny asany isan-karazany mandraka androany, izay ny toeran'ny biraon'ny ben'ny tanàna ao an-toerana.
Araka ny hitantsika, ny zava-drehetra mpizaha tany any San Pedro Alcántara dia misy ifandraisany amin'ny asany voalohany: fary maniry. Hatramin'io fotoana io dia afaka mitsidika androany ny olona a toeram-pambolena - maodely antsoina hoe El Trapiche de Gauadaiza. Niasa toy izany teo anelanelan'ny 1823 sy 1831 ary nandritra izany fotoana izany ny fitotoan'ny fikosoham-bary dia entin'ny rano entin'ny lakandrano iray izay mbola hita ny tohany.
I Marqués del Duero voalohany, mpanorina ny zanatany amin'ny fambolena, no nanolo ny Trapiche de Guadaiza orinasa mpamokatra siramamy maoderina kokoa. Ny trano taloha dia nanjary sekolin'ny foreman izay nahalalan'ny lehilahy ny fomba fiasan'ny milina fambolena tamin'izany fotoana izany. Mampalahelo fa tsy naharitra izy io satria ny asa niarahan'ny Marquis sy ny fanjakana Espaniola dia tsy nahomby.
Nanomboka teo, toa ny Villa San Luis, ny trano dia nahavita asa sy fanavaozana samihafa saingy toerana mahaliana izy io satria mahatoky vavolombelo sy ohatra amin'ny asa fambolena talohana. Dimy taona lasa izay no nohavaozina ary Androany dia ny Trapiche de Guadaiz Cultural Centermankany Trano taloha iray hafa koa La Alcoholera, orinasa mpamokatra marika vita amin'ny marika taloha ary fanadiovana zava-manitra toy ny vokarin'ny molora siramamy. Androany dia ivon-trano fanaovana teatra izy io.
Ny arabe malalaky ny tanàna no antsoina Boulevard an'ny San Pedro Alcántara, arabe vaovao, manomboka amin'ny taona 2014, ivon'ny tranokala ankehitriny. Miaraka amin'ny tetibola enina tapitrisa euro, faritra rano fito, toeram-pivarotan-lasantsy, zaridaina semi-urban, faritra maitso ary fambolena hazo vaovao sy zavamaniry manitra no namboarina. Ny fandehandehanana eto dia nanjary ny dia tsara indrindra ho an'ny eo an-toerana sy ny mpitsidika tsindraindray.
Dia an-tongotra iray hafa natoro ny Toerana fitsangantsanganana, eo akaikin'ny morontsiraka ary manana kilometatra 3 sy sasany. Betsaka ny bara eny an-dàlana ary afaka ianao mandeha an-tongotra mankany Puerto Banús. Sa manao ny mifamadika.
Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Zaridaina Three Gardens, notokanana tamin'ny 2012. Izy io dia habaka maintso lehibe izay eo avaratry ny tanàna ary mizara ho faritra telo: ny Arab Garden, the Garden Garden ary ny Subtropical Garden. Amin'ny voalohany dia misy hazo volomboasary, palmie, oliva, aviavy ary ampongabendanitra, amin'ny faharoa kosa dia hahita zaridaina kesika, rosemary ary kifafa ianao; ary amin'ny fahatelo, amin'ny famolavolana, hazo orange hatrany, jacarandaes na ficus.
San Pedro de Alcantara dia, raha fintinina, a milamina, morontsiraka, mangina, tsy misy tanjona, miaraka amin'ny mari-pana sy a gastronomy mifototra amin'ny trondro vaovao. Halahelo azy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Malaga » Tsidiho ny San Pedro Alcántara
Ranomasina Cabo de Gata
Sehatra mahafinaritra indrindra any Espana